YEYINTNGE(CANADA): Friday, September 10
10 September 2010 ဒိုင်ယာရီ
10 Sep 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/10/20100အကြံပြုခြင်း
စစ်တပ်ဆိုတော့ သက်သေလိုက်မပေးရဲကြဘူး ...
ဧရာဝတီ Friday, September 10, 2010 အင်တာဗျူး
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ ညက ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်း ရပ်ကွက် မြလမ်းရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်မှ ထွက်လာသော ခလရ ၅၉ မှ စစ်တပ်အရာရှိနှင့် အရပ်သား လူငယ်များ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားရာ စစ်တပ်က သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မောင်အောင်သူဟိန်း (၂၃ နှစ်) နှင့် မောင်စိုးပိုင်ဇော် (၁၉ နှစ်) လူငယ် နှစ်ဦး သေနတ်ဒဏ်ရာ အသီးသီး ဖြင့် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
စစ်တပ်က ပစ်သတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ လူငယ် နှစ်ဦးရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မောင်အောင်သူဟိန်း၏ အဒေါ်ဖြစ်သူအား ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မင်းနိုင်သူက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး။ ။ အာဏာပိုင်တွေက နောက်ထပ်လာပြီး ညှိနှိုင်းတာမျိုး ရှိပါသေးလား။
ဖြေ။ ။ မရှိသေးပါဘူး။ ၇ ရက်နေ့က အသုဘချတယ်။ ဒီနေ့အထိတော့ တခေါက်မှ မလာသေးဘူး။
မေး။ ။ ကျပ် ၁၀ သိန်းထပ်ပေးတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေတယ်၊ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ပေးတယ်။ ကျမတို့ဘက်က လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလေ။ ဟိုဘက်က စိုးပိုင်ဇော်တို့ မိဘတွေ ကတော့ ယူလိုက်တယ်။ အခုချိန်အထိ ဘာတပြားမှမယူဘူး။ အခေါင်းကလည်း ကျမတို့ ငွေကြေးနဲ့ပဲ ကျမတို့ ၀ယ်တယ်။ ကျမတို့ တူလေးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမို့ ကျမတို့ဘာသာပဲ လုပ်ပါရစေဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တယ်လေ။ ပထမတော့ သူတို့က အားလုံး သူတို့ပဲ စီစဉ်ချင်တယ်။ ကျမတို့ဘက်က လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဟိုဘက်က ကလေးအဖေကလည်း ညောင်လေးပင် - ရန်ကုန် ကားမောင်းတော့ ကားဂိတ် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးက ကူညီပါတယ်။
မေး။ ။ ဈာပနနေ့က ဘုန်းကြီး ငါး ပါးပဲ ပင့်ခွင့်ရတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို အာဏာပိုင်တွေကပဲ ပင့်ဆောင်ပေး တာလား။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုပါ၊ သုသာန်မှာက ဇရပ်ကလည်း ကျဉ်းတော့ နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ငါး ပါးလောက်ပဲ ပင့်ပါ လို့ သူတို့က အကြံပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဘုန်းကြီး ငါး ပါးနဲ့ပဲ သရဏဂုံ တင်တယ်။ ကလေး ဘဝကူး ကောင်းအောင်ပေါ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှတော့ ကျမတို့က သဘောမထားတော့ပါဘူး။
ဒီဘုန်းကြီးတွေက ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကတည်းက ကျမတို့ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေပါ။ ကျမတို့ လမ်းထိပ်က လေး၊ ငါး အိမ်ကျော်က ကျောင်းမှာရှိတဲ့ သံဃာတွေပါ။ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဘုန်းကြီး ဦးသုံကို ပင့်ဖို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကို ကျမတို့ ဘက်က လက်မခံခဲ့ဘူး။ ကျမတို့ကပဲတောင်းဆိုတယ်။ သူတို့ကလည်း လက်ခံသွားပါတယ်။
မေး။ ။ ဈာပနနေ့က မောင်စိုးပိုင်ဇော်ရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ တယောက်နဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ ဒီအလောင်းတွေကို ကြည့်ရှုခွင့် မရခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာသိထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ သူတို့ဘက်ကတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျမတို့ဘက်ကတော့ သွေးချင်းတွေ၊ နှစ်ဝမ်းကွဲတွေ၊ သုံးဝမ်းကွဲတွေ အကုန် ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ကျမတို့ဘက်က မောင်ဝမ်းကွဲလေးတွေက အသုဘမချခင် ကြိုပြီးတော့ ရွာက ဆိုင်ကယ်နဲ့ တက်လာတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားတာ။ ပေးကြည့်တယ်၊ အကုန်ပေးကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က စစ်ဆေးတာတော့ရှိတယ်။ ဘာတော်လဲ။ အဖေဘက်ကလား၊ အမေဘက်ကလား။ သေသွားတဲ့ အောင်သူဟိန်းနဲ့ ဘယ်လိုတော်သလဲ။ အဲဒီလိုမေးတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေ စစ်ဆေးတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ ကျမလည်း မပြောတတ်ဘူး။ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ကျမတို့လည်း မသိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဈာပနနေ့ကတော့ စစ်တပ်က လုံးဝမလာတော့ဘူး။ ကျမတို့အမေကလည်း ပြောထားတယ်လေ။ စစ်တပ်လုံးဝမပါရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့က ဒီကိစ္စနဲ့ ခံစားထားရတာလေ။ စစ်တပ်တော့မမြင်ဘူး။ ရဲတွေတော့မြင်တယ်။
မေး။ ။ အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ FM တွေမှာ လူငယ်တွေက သေနတ်ကိုဝင်လုလို့ ပစ်ရပါတယ်ဆိုပြီး ပြောတာတွ ရှိတယ်။ တကယ့်တကယ် ဘယ်လိုဘယ်နည်းနဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသလဲ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ကယ်လီဖိုးနီယား စားသောက်ဆိုင်မှာ သောက်ကြတာ၊ သူတို့လည်းသောက်၊ ကလေးတွေလည်း သောက်ကြတာ။ သောက်ပြီးအထွက်မှာ သူတို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကျမတို့ကလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးစီးလာတဲ့ တုတ်တုတ်လို့ခေါ်တဲ့ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ အဲဒါနဲ့ ငြိကြတာ။ အဲဒီမှာ ငြိတော့ ထိုးကြကြိတ်ကြ ဆဲကြဆိုကြ အဲဒီမှာ ဖြစ်ပြီးပြန်လာမှ နာရီဝက်၊ ၄၅ မိနစ် တနာရီလောက် ကြာပြီးတော့မှ ဒီဘက်ရပ်ကွက်ထဲကို လိုက်လာတာ။ အဲဒီ ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုင်နဲ့ ပစ်သတ်တဲ့နေရာနဲ့ ဝေးတယ်။ တော်တော် လာရတာ။ အဲဒီမှာပဲ ပစ်သတ်သွားတာ။
မေး။ ။ အဲဒီအချိန်မှာ အပစ်ခံရတဲ့ နှစ်ယောက်ကအပြင်မှာပဲ ရှိနေတာလား၊ အိမ်ထဲကိုပြန်မရောက်ခင် တွေ့သွားတာလား။
ဖြေ။ ။ ဒီပြဿနာမဖြစ်ခင်မှာ အေးအေး ဆေးဆေးပဲ၊ သူတို့ လမ်းထိပ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ဂစ်တာထိုင်တီးနေတာ။ သီချင်းတောင် သုံးပုဒ်ဆိုသွားတာ။ သူတို့ဟာသူတို့ ထိုင်တီးနေတာ။ နောက်ကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေကထပြီး ကိုကြီး အောင်သူဟိန်း ရန်ကုန်ပြန်တော့မှာမို့ လက်ဖက်ရည် သောက်ကြရအောင် ဆိုပြီး သွားကြတာ။ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည် မသောက်ဖြစ်ဘဲနဲ့ အရက်သောက်တယ်လို့ ကြားတယ်။ ကျမတို့က အိပ်မလို့ လုပ်နေကြတာ။ အဲဒီမှာ သူတို့ဖြစ်ပြီးတော့မှ၊ သေနတ်တွေ ပစ်ဖောက်သံကြားတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမရဲ့ တူလေးအသံ မကြားမိဘူး။ ယောက်ျားလေး အသံတွေတော့ ကြားမိ တယ်။ အော်ဟစ် ဆဲဆိုနေတဲ့အသံတွေကြောင့်မို့လည်း ဂရုမစိုက်လိုက်ဘူးပေါ့။ တကယ်လို့ ကျမ တူရဲ့အသံသာ ကြားမိရင် အတင်းဝင်ဆွဲမိမှာပဲ။ ကျမတို့က အမြဲတမ်း ဆင်းဆင်းပြီး ထိန်းသိမ်းတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကျမတူက လွန်လို့ သူများကို ထိုးမိရင်လည်း သူများမိဘတွေကို တောင်းပန်တာမျိုး လုပ်ပေးတာပါ။ ကျမတူကလည်း အဲဒီလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မဟုတ်ပါ ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်တူရဲ့အသံမကြားတော့အိမ်မှာပဲ ငြိမ်နေလိုက်တာပေါ့လေ။ သေနတ်ဖောက်သံကြားတော့ ပိုကြောက်တာပေါ့။ ကျမတို့လည်းပြေးဆင်းသွားရော ကျမတို့ ရှေ့အိမ်မှာ အမေသေလို့ မုံရွာမှာ တာဝန်ကျရာကနေ ပြန်လာတဲ့ ဒု ရဲအုပ်လေး တယောက် ရောက်နေတယ်။ သူက ကျမတို့ကို မဆင်းနဲ့၊ ဒါ ဗျောက်ဖောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်နေတာဆိုတော့ ကျမတို့လည်း လှေကားမှာပဲ ထိုင်နေလိုက်ကြရတာပေါ့နော်။ နောက် ဆက်တိုက်ပါပဲ ဒက်ဒက် ဒက်ဒက်နဲ့ ဆော်ချသွားတာ။
မေး။ ။ အဲဒါဆို မောင်အောင်သူဟိန်းတို့က ပထမ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာကနေ အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာ ပြီးတော့ အေးအေး ဆေးဆေး ပြီးသွားပြီလို့ ထင်နေတဲ့အတွက် ဂစ်တာတွေ ဘာတွေ တီးနေကြတာလား။
ဖြေ။ ။ ဂစ်တာတော့ မတီးတော့ဘူး။ အဲဒီ အုတ်ခုံမှာ ထိုင်နေတယ်။ ထိုင်နေလိုက်ပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ မြလမ်းထဲမှာ သူတို့ အဘိုးအဘွားအိမ် ပြန်အိပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကလေးတွေက ထပြီးအထွက် မြလမ်းထဲမှာ ဟိုဘက်ထိပ်က နှစ်ယောက် ဒီဘက်ထိပ် က တယောက် နှစ်ဘက်ကို ညှပ်ပြီး ဆော်ချလိုက်တာ။
မေး။ ။ အဲဒီအချိန်မှာ မျက်မြင်သက်သေတွေရော ရှိနေလား။
ဖြေ။ ။ မျက်မြင်သက်သေကတော့ တပိုင်းလုံးပဲ။ အဲဒီနားမှာ ရှိနေတဲ့ အိမ်တွေကတော့ ဒီကလေးတွေဖြစ်နေတာကို သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်တဘက်က စစ်တပ်ဆိုတော့ သက်သေလိုက်မပေးရဲကြဘူး။ သူတို့ကလည်း ကျမတို့ မိသားစုကို ကူညီချင်ပေမယ့် ဘယ် အကူအညီပေးရဲမလဲ။ သူတို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို သိနေတော့ ဘယ်သူမှ ပြောပေးတဲ့ လူမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ မီးမှောင် ချပြီး တော့ သူတို့အခင်းဖြစ်တာကို ကြည့်နေတဲ့ လူတွေရှိပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို အဲဒီအပိုင်းက လူတွေက အတိအကျ သိတာပေါ့။ သူတို့ တွေက ကျမတို့ထက် ပိုသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ကသွားခေါ်ပြီး အမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူမှ လိုက်ပေးတဲ့ လူမရှိဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျမတို့ အမေကလည်း ကျမတို့ အေးအေးဆေးဆေးနေ၊ သူတို့လူကြီးတွေ သက်ဆိုင်ရာနဲ့ လုပ်မယ်လို့ ကတိ ခံထားပြီးပြီ။ ညည်းတို့ဘာမှ လုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ ကျမတို့ကိုပြောထားတာ။
မေး။ ။ ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းက သူတို့စစ်တပ်ဘက်က အင်အား ဘယ်လောက် ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမ ကြားတာကတော့ သူတို့ လွှတ်လိုက်တာက ၈ ယောက်ပေါ့။ ၅ ယောက်ကတော့ အပေါ်ထောင် ခြောက်လှန့် ပစ်တာ။ ပစ်ပြီးတော့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့ဆို တလမ်းကျော်၊ ပုလဲလမ်းကနေ ပြန်ထွက်သွားတယ်။ နောက် ၃ ယောက်က မပြန်ဘဲနဲ့ လိုက်ပစ်တာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပိုင်းက အတိအကျ သိတဲ့လူတွေပြောတာက သေနတ်နဲ့လူကိုချိန်ပြီးတော့ကို ဆင်းလာတာတဲ့။ မြင်တဲ့လူတွေက ပြောတာနော်။
မေး။ ။ အောင်သူဟိန်းတို့၊ စိုးပိုင်ဇော်တို့ သေနတ်အပစ် ခံလိုက်ရပြီးတဲ့အချိန် နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ကို ဘယ်သူတွေက ဘယ် နေရာကို သယ်သွားတာလဲ။
ဖြေ။ ။ ရင်ခွဲရုံကို ရဲတွေက သယ်သွားတာ။ သယ်သွားပြီးတဲ့နောက် ကျမတို့ ကာယကံရှင်တွေ လိုက်ချင်ရင် လိုက်ခဲ့ဆိုလို့ ကျမလည်း ခပ်လှမ်းလှမ်းက လိုက်သွားတယ်ပေါ့လေ။ ကလေးတွေကို အုတ်ခုံပေါ်ကို တင်ဖို့အတွက် ကျမ တူရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၆ ယောက်၊ ၇ ယောက်လောက် လိုက်သွားတယ်။ လိုက်သွားပြီးတော့ အဲဒီ ရင်ခွဲရုံ က အုတ်ခုံပေါ်မှာ တင်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်ထွက် လာရတယ်။ သူတို့ တံခါးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။
မေး။ ။ ရဲတွေက အောင်သူဟိန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လာသယ်တယ်ဆိုတော့ စစ်တပ်ကနေ ပစ်သတ်ပြီးတော့ ဘယ်အချိန် လောက်မှာ လာသယ်တာလဲ။
ဖြေ။ ။ စစ်တပ်က ပစ်သတ်လိုက်ပြီးတော့ ၄၅ မိနစ်လောက် ငြိမ်ကျသွားပြီး ဘယ်သူမှ မလာသေးဘူး။ နောက်ပိုင်း ၁၁ နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ကျမှ ကျမ စိတ်ထင် ၁၁ နာရီ ၁၅ လောက်ရှိမယ်။ ရဲတွေအကုန် ဆိုင်ကယ်နဲ့ မီးတွေထိုးပြီး ဝင်လာတာ။ ဆိုင်ကယ်မီးတွေနဲ့ ဝင်လာပြီးတော့ ကလေးတွေကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ မြလမ်းကို မီးမှောင်ချလိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့လမ်းကျတော့ မီးမမှောင်ဘူး။
မေး။ ။ အဲဒီ ၄၅ မိနစ်အတောအတွင်းမှာ အစ်မတို့က သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆွဲထူတာမျိုး မလုပ်ဘူးလား။ ရပ်ကွက်က လူတွေကလည်း မလုပ်ကြဘူးလား။
ဖြေ။ ။ မလုပ်ကြဘူး။ ဘယ်သူမှ မလုပ်ကြဘူး။ ကျမက ဘယ်လိုသိလိုက်လဲ ဆိုတော့ ကလေး ၂ ယောက်၊ ၃ ယောက်က ပြေးပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဟာ ကိုအောင်သူဟိန်းပဲ။ ပွဲချင်းပြီးသွားပြီ။ ရင်ဘတ်တွေလည်း ပွင့်ထွက်သွားပြီ အော်လိုက် လို့ ကျမလည်း ပြေးဆင်းသွားတယ်။ ပြေးဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ ၂ ယောက် ၃ ယောက်တော့ ရှိတယ်။ ဘယ်သူတွေလည်း မသိဘူး ပေါ့၊ ရဲတွေလား ဘာလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီလို ကျမက ဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ ပေးမဝင်တော့ဘူး။ ဒီနေရာဟာ သာမန် နယ်မြေ မဟုတ်တော့ဘူး၊ သေနတ်ပစ်လို့ သေထားတဲ့အတွက် ကန့်သတ်နယ်မြေ ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကျမက ကျမ အဒေါ် အရင်း ပါ၊ ကျမကိုပေးကြည့်ပါလို့ ပြောတော့၊ အစ်မရယ် ကျေးဇူးပြုပြီးမဝင်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံတယ်လေ။
မေး။ ။ ရင်ခွဲရုံကိုသယ်တော့ ဘယ်လို သယ်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဆိုက်ကားနဲ့ပဲသယ်တာ။ ကားတွေ ငှားမရတော့ဘူးတဲ့။ ကျမတို့က ကားငှားပေးပါ၊ ကျမတို့ ကလေးတွေကို ဒီလိုမျိုး ပိုးဆိုး ပက်စက်ကြီးလည်း မတင်ချင်ဘူးပေါ့။ ကျမက အဲဒီလိုပြောတယ်။ အချိန်တော်တော်ကြာတယ်။ စစ်ဆေးရတာလေ။ ၁၁ ခွဲ မှာ ပစ်သတ်လိုက်တာ ပွဲချင်းပြီး သွားတယ်။ အဲဒီနောက် ရင်ခွဲရုံကိုတင်တာ မနက် နှစ်ချက်ခွဲကြီးမှ တင်တာ၊ ဆိုက်ကားနဲ့။
မေး။ ။ ဒီပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန် ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေက ထွက်လာတာတို့၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာတို့ မရှိဘူးလား ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါတော့ မရှိဘူး။ ရဲတွေလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရပ်ကွက်က ရယက အဖွဲ့တွေပါလာတယ်လေ။ ကျမတို့ အိမ်ကပဲ ဖုန်းဆက်ခွင့် ပေးပါဆိုပြီး ဖုန်းဆက်သွားသေးတယ်။ ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌကို ကျမက ပြောတယ်၊ ကျမ တူလေးကို အပြင်ကို ထုတ်ပြီးတော့ စစ်ဆေး ခွင့် ပေးပါ။ အပြင်ဆေးရုံကို တင်ခွင့်ပေးပါလို့ပြောတော့ သူက စိတ်လျှော့လိုက်တော့တဲ့၊ တူလေးက လောလောဆယ် ဒဏ်ရာ အကြီး ၄ ချက်လောက် တွေ့ထားတယ်၊ သေသေချာချာတော့ မစစ်ဆေးရသေးဘူးပေါ့။ တူလေးတော့ ပွဲချင်းပြီးသွားပြီ၊ နောက် တယောက် ကတော့ ဘယ်သူ့သားလဲ မသိဘူး။ အဲဒီ ကလေးလည်း ပွဲချင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။
မေး။ ။ အောင်သူဟိန်းက ဒီ ပစ်ခတ်မှုတွေ မဖြစ်သေးခင်အချိန်မှာ၊ ကျနော်တို့က အစ်ကိုတို့ ဘယ်သူမှန်း မသိလို့ ဖြစ်သွား တာပါ၊ ကျနော်တို့မှာ အပြစ်ရှိပါတယ်၊ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းခေါ်သွားပါလို့ ပြောသေးတယ်လို့ ကြားတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ဒူးထောက်ပြီးတော့ တောင်းပန်တယ်။ အဲဒါ မနက်ဖြန်လို ဈာပန ချမယ်ဆို ဒီနေ့ညလို အဲဒီအပိုင်းထဲက မျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကလေးက လာပြောပြတာ။ အသေအချာကို ဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်တယ်။ အစ်ကိုတို့က စစ်တပ်လား၊ ရဲလား ကျနော်တို့ မသိလို့ပါ၊ အရာရှိတွေမှန်း မသိလို့ပါ။ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် မှားပါတယ်၊ ကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးပါ၊ စစ်တပ်ဆိုလည်း စစ်တပ်ထဲကို ခေါ်သွားပါ။ ရဲဆိုလည်း ကြိုက်တဲ့နေရာကို ခေါ်သွားပါ။ ကျနော်တို့ကို အပြစ်ပေးပါ၊ ကျနော်တို့ မှားသွားပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ဒူးထောက်ပြီး တောင်းပန်တာ။ အဲဒါကိုမှ တည့်တည့်ကိုချိန်ပြီး ပစ်ချလိုက်တာတဲ့။ ကျမ တူလေးက ထိသွားပြီ၊ ထိသွားပြီ ညီလေး မင်းပြေးတော့၊ ပြေးတော့ ဆိုပြီးပြောတော့ ဟိုကလေးက မပြေးဘဲနဲ့ ထပြီးနပန်းလုံးတာတဲ့။ အဲဒီ မျက်မြင်ကလေးရဲ့ ပြောပြချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးကလည်း တရားဝင်ပြော ဆိုရင် ပြောရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြီးတွေကို ပြောမယ်ဆိုရင် ကလေး မိဘတွေကလည်း ပြဿနာဖြစ်မှာကြောက်လို့ သဘောတူပြီးတော့ ပြောခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး တခြား အဖွဲ့စည်းနဲ့ဆိုရင် သူတို့ လိုက်ရဲတယ်။ ဥပမာ ရဲနဲ့ဖြစ်ရင်ကို လိုက်ရဲဦးမယ်။ စစ်တပ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ဒီအဖွဲ့ အစည်း က လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတာဆိုတော့ ဘယ်လိုမှကို သူတို့ လိုက်နိုင်မယ့် အနေအထား မရှိကြဘူး။ ကလေးတွေကတော့ မခံမရပ်နိုင်တာတော့ မခံရပ်နိုင်တာပေါ့နော်။ ကျမတို့ကိုလည်း သွေးမအေးဖို့ သူတို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ အနေ အထား ကလည်း ဘယ်လိုမှကို မတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေ ရှိနေတယ်။ သူတို့ကလည်း မခြိမ်းခြောက်ပါဘူး ။ကျမတို့ကလည်း သူတို့လုပ်ပေးတာကို မခံဘူး။ သူတို့ကလည်း အခုအချိန် သူတို့မှားသွားတော့ အကုန်လုပ်ပေးချင်နေတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်သူက ပစ်ခတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ ကြားထားမိလဲဗျ။
ဖြေ။ ။ အစ်မရဲ့တူလေးတွေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ပြောတယ်။ ဟိုဟာလေ၊ ဘုရားသုံးဆူ သားလို့လည်းပြောတယ်။ ကျန်တာတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် မနေ့က အသုဘ နာရေးလာတဲ့ သူတွေက ပြောတယ်၊ သတင်းဌာနတွေမှာ ပါသွားတာတော့ ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး၊ သတ်လိုက်တာက တပ်သား မောင်ထွန်းတဲ့။ မောင်ထွန်းတဦးတည်း ပစ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပစ်တာတော့ ၃ ဦး ပဲ။ အတိအကျပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က တဦးတည်းပဲ နာမည် ထည့်ထားတယ်။
မေး။ ။ ပစ်ခတ်မှုတွေ အပြီးမှာ ရပ်ကွက်လူထုက ကျည်ခွံတွေ ဘာတွေ ကောက်ယူထားလိုက်တာ၊ သိမ်းဆည်းထားလိုက်တာ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ အဲဒါလည်း ကောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျည်ဆန်ခွံပေါ့။ ရဲအချင်းချင်း ပြောနေသံ ကြားတာတော့ ကျည်ဆန်ခွံ ၉ ခု လောက် ရတယ်လို့ ကြားလိုက်တယ်။
မေး။ ။ အပစ်ခံရသူတွေနဲ့ အတူတူပါတဲ့ လူငယ်လေး နှစ်ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းထားတယ်ကြားတယ်။ သူတို့ကိုကော ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်ပြီ လား။
ဖြေ။ ။ ကျမတို့ အမေနဲ့ ကျမတို့ ဦးလေးက တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေ။ ကျမတို့ ကလေးတွေကတော့ သေသွားပြီ။ ဒီ ကျန်တဲ့ ကလေးတွေကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်ဖို့ ထုတ်ပေးဖို့ဘာညာ လူကြီးတွေကို တောင်းဆိုခဲ့လို့ ရဲချုပ် ခင်ရီ ကိုယ်တိုင် ညဘက် ၁၁ နာရီထိုးမှာ ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ အခု ပြန်ရောက်နေတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။
မေး။ ။ အခု အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုတွေ ဘာတွေရော ရှိနေသေးလား။
ဖြေ။ ။ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ ရုပ်သိမ်းသွားပြီ။ အဲဒီဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီး အသုဘမချခင်နေ့ အထိကတော့ အဖွဲ့လိုက် အဖွဲ့လိုက်တွေ ချည်းပဲ။ လမ်းထဲက တဲတွေထဲမှာရော ဘာရော အကုန်လုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ အိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာတော့ မရှိဘူး။ ကျမတို့အိမ် ရဲ့ ၃၊ ၄ အိမ်ကျော်မှာတို့၊ မျက်စောင်းထိုးတို့ လောက်မှာနေပြီး အရပ်ဝတ်အရပ်စားတွေနဲ့ ချပြီးတော့ အဝင်အထွက် ဧည့်သည် ဘယ်လောက် လာသလဲ၊ အမြဲတမ်း သူတို့က စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်းပို့နေကြတာ။
Canada Foreign Minister’s message and three political parties on UN Commission of Inquiry on Burma
We are bringing your attention to an important article published by Embassy Newsweekly regarding Canada’s position on the UN Commission of Inquiry into human rights situations in Burma. You will also see the supporting statement of all three Canadian opposition political parties: Liberals, NDP and Bloc Quebecois.
But first, you can viewastatement of Canadian Foreign Minister Lawrence Cannon that was videotaped and sent to the Canadian Friends of Burma (CFOB). The video-taped message was showed at Regional Strategy Meeting (RSM) held in Thailand on Sept. 9, 2010, where more than 80 leading Burma campaigners representing 54 groups from more than 20 countries including Canada and the United States attended.
The text of the Minister’s statement in video-tape:
“Canada has consistently called upon the Burmese regime to respect the human rights and fundamental freedoms of all people in Burma. Canada has imposed the toughest sanctions in the world against the Burmese authorities to emphasize our condemnation of the regime’s disregard for human rights and its repression of the country’s democratic forces.”
“Canada supports both the UN Special Rapporteur’s work on human rights in Burma, and the idea ofaUN Commission of Inquiry into human rights abuses by the Burmese regime. We will work with our allies in the international community to developacommon approach to support the recommendations that the Rapporteur will present to an upcoming committee of the UN General Assembly.”
Canada throws support behind Burma inquiry
Embassy Newsweekly – (Canada’s Foreign Policy Newsweekly)
Canada has followed the US and several other countries by throwing its support behind calls foraUN inquiry into human rights abuses in Burma.
But while the news has been met with applause from some quarters, others say the government's support appears tentative at best, and they continue to question why it took so long foraCanadian position to become known.
In March, Tomas Ojea Quintana, the UN special human rights rapporteur to Burma, issuedareport to the UN Human Rights Council claiming there have been "gross and systematic" human rights abuses in the country, which is also known as Myanmar, involving all levels of authorities and branches of government.
The report says the "possibility exists that some of these human rights violations may entail categories of crimes against humanity or war crimes under the terms of the Statute of the International Criminal Court."
Australia, the UK, the Czech Republic and Slovakia moved to back Mr. Quintana's call for the establishment of an inquiry into possible war crimes in the military junta-controlled country. The biggest boost to the effort, however, came last month when American officials revealed the US was also in favour of suchamove.
In an email to Embassy last week,aspokeswoman for Foreign Affairs Minister Lawrence Cannon, Melissa Lantsman, wrote: "Canada supports both the UN special rapporteur's work on human rights abuses in Burma, and the idea ofaUN Commission of Inquiry into human rights abuses by the Burmese regime,"
"We will work with our allies in the international community to developacommon approach to support the recommendations that the rapporteur will present to an upcoming session of the UN General Assembly."
News of the government's decision to support the call foraUN inquiry was met with applause.
"We are very relieved and feel excited and happy that Canada is indeed responding toamounting call from both domestic and international communities to supportaUN Commission of Inquiry into human rights abuses in Burma," Tin Maung Htoo, executive director of the Canadian Friends of Burma, wrote in an email. "This response and position show Canada is in line with other like-minded countries...in calling for accountability and responsibility of all forms human rights violations taking place in Burma."
However, Mr. Htoo saidanumber of questions still remain, including the exact form of Canada's support.
"How are they going to implement it?" he asked. "There are many, many steps ahead."
Ms. Lantsman said that "once our consultations are over, and once we are presented with something formal on which we can draw our support, we will."
NDP Foreign Affairs critic Paul Dewar, who is also co-chair of the Parliamentary Friends of Burma group, commended the government for its decision, but questioned why it took so long for Canada to break its silence.
Ms. Lantsman did not explain what many felt wasaslow response. However, it is likely notacoincidence that the announcement came only after the Obama administration had made its position known.
The US had been pursuingapolicy of diplomatic engagement with the military junta, butasenior administration official told the Washington Post: "There have been no positive results on democracy and human rights in our diplomatic engagement."
At the same time, there may have been concerns that suchacall could endanger elections set for Nov. 7—the first to be held in Burma in decades. Canada has already expressed concern about the pending polls, which many doubt will be free or fair. However, some Burmese pro-democracy groups have held out hope the elections will markasmall move towards true democracy in the country.
Mr. Dewar says if Canada was concerned about the impact suchadeclaration would have on the elections, "I don't see why they would be reluctant to say they were waiting to see how things went."
Brian John, Amnesty International Canada's Myanmar co-ordinator, said that "it is about time that the government tookastand on this vital matter."
However, he also felt the statement was anything but clear, and questioned why the government would wait for the UN special rapporteur to file his report with the UN Human Rights Council later this month before coming out withaclear call foracommission of inquiry.
"Why wait?" he asked. "Is Mr Quintana likely to change his mind from what he reported in March? The human rights situation in Myanmar has not changed—except for the worse."
OTTAWA (August 27, 2010) – The Liberal Party is calling on the Conservative government to support an international call foraspecial United Nations Commission of Inquiry into allegations of war crimes and crimes against humanity by the Burmese junta.
OTTAWA (Tue 31 Aug 2010) – Canada should add its support for the establishment ofaUN Commission of Inquiry into alleged crimes against humanity and war crimes committed by the military regime in Burma, says New Democrat Leader Jack Layton (Toronto-Danforth).
The Bloc Quebecois Presses Stephen Harper to Get Involved in Ending the Crimes Against the Burmese People
Ottawa (Friday, September 3, 2010) – The Bloc Québécois Foreign Affairs Critic and MP for La Pointe‑de‑l’Îsle, Francine Lalonde, is pressing the Conservative government to support the creation ofaspecial UN commission of inquiry into allegations of war crimes and crimes against humanity by the Burmese military junta. Ms Lalonde said she was astonished by the Canadian government’s silence, especially since it preens itself on having imposed the world’s most stringent sanctions on Burma in December 2007.
“Today,” Ms Lalonde said, “we are calling upon Prime Minister Stephen Harper and Foreign Affairs Minister Lawrence Cannon to have Canada join its voice to those of the United States, Great Britain and Australia, among others, asking that the United Nations set upacommission to shed light on the brutalities committed by the Burmese military junta against the Burmese people. The UN General Assembly is meeting this September 14; Canada has an obligation to propose the establishment of suchacommission straight away.
“I would like to remind the Harper government,” the MP for La Pointe‑de‑l’Îsle said, “that in 2005 Parliament unanimously adopted the report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade dealing withamotion on Burma. That motion, in addition to forcefully condemning the repeated and systematic human rights violations committed by the military junta in Burma, strongly urged the Canadian government to do everything in its power to help re-establish rights and democracy in Burma. The Harper government’s failure to act is baffling, given the urgent need foracommission of inquiry.”
Canada Foreign Minister’s message and three polit...